Ndị na-eto eto na ụlọ: teknụzụ na akụrụngwa, na-edebe ọkụkọ na ọkụkọ, ịzụ na nlekọta, ọrịa - Ugbo - 2019
Ihe dị n'ime na ịzụlite ọkụkọ broiler na ibé na n'ụlọ
Ngwakọta Chicken Meat - Broilers - dị iche na ụmụ nnụnụ na-eto eto na-enwewanye ike mmepe na obere ego na-eri kwa 1 n'arọ.
Igwu ọkụ ọkụ na-eto eto n'ubi a bụ uru dị mma. A na-egbu ha maka anụ mgbe e debere ha maka ọnwa 2.5. Na nlekọta kwesịrị ekwesị, ibu nke ọkụkọ na oge a bụ 1.4-1.6 n'arọ.
Egwuru ahihia na ogugu ndi anu ulo ozuzu nwere ihe ndi ozo di elu karia ihe bara uru. Achịcha ndị a kwadebere na ya na-eri nri ma na-atụ aro maka ụmụaka, ndị agadi na ndị ọrịa.
Na-eto eto ụdị ọkụkọ nwere atụmatụ ụfọdụ. A ghaghị idebe ha n'ụlọ ọkụ, na-elegide anya na ọchịchị ọkụ.
Akụkụ nke ịgha mkpụrụ na ọnọdụ njide
Nri na nlekọta
Isi ihe dị mkpa
Nhọrọ nke ụdị
A na-azụta ọkụkọ site n'aka ndị na-emepụta ọkụkọ.ịzụlite ha kpọmkwem maka ire ere. Ọtụtụ ndị na-agbalị ịzụta chicks nke kwa ụbọchị na ọnụ ala kachasị. Ma na ụbọchị mbụ nke chicks ndụ na-anwụkarị.
Ya mere mgbe ụfọdụ ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịka nwata nke ụbọchị 10. A na-azụta ezigbo ọkụkọ na ọdụ ụgbọ ala n'ime ugbo.
Ọ dị mkpa ịhọrọ mobile, ọkụkọ ọkụ ọkụ na-egbuke egbuke na anya. Iji mara ọdịiche dị n'etiti akwara na ọkụkọ, ịkwesịrị ịgbatị nku ọkụkọ. Umu ubochi nke otu uzo, n'ile anya - iche.
Ọkụ ahụike dị iche dị nro ma na-ehicha, nke dị ala, "ịnyịnya ibu" dị ọcha. Ha ga-enwe nku ha n'ahụ. Ma n'ihi ụdị ụfọdụ nke broilers ("Cobb 500", "ROSS-308") afọ na-abawanye mbara, ụda ụkwụ nke ụkwụ na bekee bụ ihe nkịtị.
Ndị ọkụkọ na-eto eto na-emekarị na-anabata ụda. Mgbe ha na-etinye aka na igbe ebe ha nọ, ụmụ chicks na-enwekarị mkpọtụ.
Maka ịzụ ụlọ na-adabara adaba anụ ọkụkọ "Dominant", "Change", "Avian Farms", "Tibro", "Tetra", "Ross", "Lohmann".
A cross bụ eriri ọkụkọ. na ụfọdụ Njirimara. Silver ọla, Kuchinskaya jubilee, Rodaylanp, Plymouthrock ga-edozi ụdị anụ ọhịa, ma àgwà anụ ha dị ala.
Ntughari anụ kachasị ọsọ na ụwa bụ Smena-7. Ihe dị ka ọkara nke ndị na-eburu ahịhịa na-akọ site n'ugbo anụ ụlọ na-eri nri site n'aka osisi Smena.
Banyere crosses cross, ndị Cobb 500 na ROSS-308 bụ ndị kachasị mma.
Site na Mbelata anụ ọkụkọ na anụ ugbo, ọ naghị adị mfe mgbe niile iji nweta ọkụkọ broiler kwa ụbọchị. N'ebe a, tupu ịmalite na-eto eto maka anụ, ndị nwe ụlọ nke aka ha na-azụ ụmụ nnụnụ toro eto ma ọ bụ na-ebuli ha ruo mgbe ha toro. Mgbe ahụ enweta hat na ha.
Ụlọ ọrụ ahụ na-emepụta ngwa ngwa nke obere obere maka ụlọ ndị mmadụ. Domestic Nsukka na-emepụta ụdị: IPH-5, IPH-10, LEO-0,5, "Ụdị" na ndị ọzọ. Ha na-etinye nsen 50-100.
Ma ị na-arụ ọrụ na incubator bụ usoro dị mgbagwoju anya nke chọrọ ihe ọmụma pụrụ iche, ịkwado ịzụ ọkụkọ ọkụ ọkụ na ịzụta ihe dị oke ọnụ.
Maka incubation, àkwá jiri nlezianya họrọ dịka ọdịdị, ịdị arọ, àkwá na ọnọdụ nke shei. Maka ịzụ anụ na-eto eto, ịjụ ajụ abụghị obere.
N'oge usoro nhazi, a na-enyocha nhazi usoro.: ịgụ nke ọkụ na mmiri ọkụ, oghere nke dampers, na-atụgharị trays, na-akwado ọrụ. Ọ bụ ezie na a na-echekwa ọnọdụ incubation na-akpaghị aka, otu ugboro na awa 8 a na-enyocha agụpụta ngwá ma nyochaa ọrụ nke ngwaọrụ ahụ.
E nwere ike ịchọta rabbits banyere ebe a. Nke a dị mma!
Na-adabere na ohere na ọnọdụ dị na ụlọ, ndị na-eji mmiri ozuzo na-etolite site n'ụzọ dị ukwuu ma dị egwu. Na ụzọ mbụ, a na-azụta otu ọkụkọ ọkụ na mmiri ma ọ̄ bụ oge ọkọchị ma too ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ. Mgbe ị na-eji ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ, a na-azụ ụmụaka na ọkara 3-4 ọ bụla n'ime obere batrị n'afọ.
A naghị ekwe ka ọkpụkpụ na-aga ije ma na-eri nri zuru ezu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịzụta ihe ọ bụla, mgbe ahụ, ha kwadebere n'ụlọ, na-eme ka ngwakọta dị ka ụkpụrụ ndị a kapịrị ọnụ. Mkpụrụ ọkụ ọkụ na-eto eto ruo ihe karịrị ụbọchị 70 abụghị nke nwere ike ịba uru. Mgbe afọ a gasịrị, mmepe ha na-eme ngwa ngwa, na nkwụghachi azụ nke nri na-ebelata.
A na-enwe ọkụkọ broiler na ụdị ọnọdụ abụọ: n'elu ebe a na-edeba ihe na ebe dị n'ime ọgba (broiler cage). Na ụzọ mbụ, dị ka aha ahụ si dị, iburu akwụkwọ na-arụ ọrụ dị mkpa. Ọ ga-abụ nke akọrọ, nke nwere ike ịmalite ikuku gas na-emerụ ahụ.
Nhọrọ kacha mma bụ drydust. Nkwonkwo ha nwere ike ịbụ ihe ruru 10 cm .. Tupu ekpuchi ya na sawdust, fesa n'ala na kpoo na ọnụego 0.5-1.0 kwa 1 m2. Ime ụlọ na-azụlite ọkụkọ ụbọchị dị iche iche na-agba gburugburu elekere.
Na 1 m2 mpaghara nwere ike ịnwe ruo 18 isi. Ma ọ chọrọ ezigbo ventilashion. Na ụbọchị mbụ nke ịgha mkpụrụ, a nọgidere na-enwe okpomọkụ na 26-33 Celsius. N'izu nke anọ, ọ na-eji nwayọọ nwayọọ belata ruo 18-19 Celsius C. Mgbe okpomọkụ dị ala, uto nke chicks na-egbu oge na ndị na-adịghị ike ka ọkụkọ na-anwụ anwụ.
A na-eji ọkụ eletrik na-ekpo ọkụ ụlọ. A ghaghị gbanwee okpomọkụ ahụ kwa oge.
Ọ bụrụ na ọkụkọ jupụtara na ọkụ, mgbe ahụ ọkụ anaghị ezuru. Ọ bụrụ na ị na-edina na nku na-agbasa na isi agbatị, okpomọkụ ga-ala.
Maka na-eto eto na ụlọ, a na-echekwa okpomọkụ dị elu karia na usoro nke n'èzí. Ọkụkọ na ọnọdụ ndị a enweghị ike ịhọrọ ebe ọkụ, n'ihi ya, ọ dị mkpa na okpomọkụ na elu elu adịghị ada n'okpuru 34 Celsius C.
Nke a dị mkpa karịsịa maka chicks nke oge. Mmetụta nke ịdakwunye ụmụaka ntanetị - 10 anụmanụ kwa 0.5 m2. Ọ dịghị agbanwe ruo mgbe aghara agwụ.
Na mmalite, a na-enyekwa ụmụ obere nri dị ka anụ ọkụkọ. Ihe oriri ha na-agụnye millet, sie sie, oatmeal, ọka wit, barley, ọka. Nri nri kwesịrị 60-65% nke ndepụta zuru ezu.
Site na ụbọchị 3 gbakwunye na na-ehichapu elu elu. Enwere ike dochie ya ma ọ bụ ọka wheat (ọka ọka dị mma). A na-eri nri ọka na-abụghị ihe karịrị 5 g kwa isi kwa ụbọchị. Ọ bụ anụ ahụ na-etinye eriri ahụ n'ime ya.
Site na afọ 20 20% nke ọka nwere ike dochie ya na poteto nduku na-eme ka mmiri mash. A ghaghị itinye ihe ndị nwere ike ịnweta ihe oriri maka ọkụkọ: nzu, nri ala, shea. Na ụdị nke a na-echi ọnụ, a na-eme ha n'ime 2-3 g kwa isi kwa ụbọchị site na ụbọchị 5.
Ha na-azụ anụ nnụnụ na mgbe mgbe. Site n'izu mbụ nke ndụ - ugboro 8 n'ụbọchị, site na nke abụọ - 6, site na nke atọ - 4 na site na otu ọnwa dị afọ 2 (ụtụtụ na mgbede). Site n'izu nke 5 a họọrọ nnukwu nri. Chicks kwesịrị inwe mmiri ọkụ dị ọcha, ma ha anaghị aṅụ ọkụ (karịa 30 Celsius C).
Na ọnwa nke abụọ nke nri Chicks na-achọsi ike na ngwakọ nke ndepụta ahụ. Na oge a, ndepụta nri, nri ahihia na ahịhịa na-eme ka nri rie nri, na ọnụ ọgụgụ nri protein na-ebelata.
A na-ekpebi ogo ma ọ bụrụ na ụmụ nnụnụ dị njikere maka igbu egbu abụba dị n'okpuru nku na obi. Ọ bụrụ na akpụkpọ anụ na-acha ahụ, abụba kwesịrị ịhụ ya.
Na-achọ ozi gbasara eto eto na ilekọta ugu? Azịza ya dị n'isiokwu a.
Esi mee ka e nwee akwa ifuru n'isiokwu a.
Video ka esi eme compost olulu: //selo.guru/stroitelstvo/dlya-sada/kak-sdelat-kompostnuyu-yamu.html
Na ugbo ulo oru ugbo nri nke broilers - nri na-azụ. Na ugbo na-enweghị nri echebara echiche ma dịgasị iche iche, ọkụkọ nwere ike ghara ịbụ onye ezi omume. Iji nyochaa uto nke ndị na-ere nri chọrọ ka ha na-atụgharị kwa izu.
Ụbọchị ise mbụ karịsịa oge nri maka chicks. E mebeghị usoro nchịkọta ha ma ndepụta kwesịrị ịdị mfe digestible.
Nke dị oké mkpa maka mmepe na ịzụlite ọkụkọ ọkụ. A na-arụ ọrụ nke ọma na ha na-arụ ọrụ. Mgbe ha na-ebu ụzọ na-aga elekere, ha chọrọ ka mkpuchi elekere.
Na nzukọ kwesịrị ekwesị ọbụna n'obere ala na oge okpomọkụ (May-August), a na-ebulite ọkụ abụọ nke ọkụkọ ọkụ na-enweghị ego. Ya mere, ị ga-enwe ike inye anụ ahụ nri.
Ụfọdụ foto bara uru, maka mmụba dị na pịa ha.
[mgbagwoju anya id = 6]
Otu esi eme akwa ogige nke na-ekpo ọkụ na griin ha: nyochaa ụzọ
Olee otu esi ahọrọ okooko osisi n'ime ụlọ na anaghị achọ nlekọta pụrụ iche
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ihe dị n'ime na ịzụlite ọkụkọ broiler na ibé na n'ụlọ